प्रकट भएको Corona-त्रास को कारण | Apg29
सरकार कट ज्याला गर्न चाहन्छ!
जो कोहीले चीन मा वुहान केही नयाँ coronavirus को सुनेका अघि काम घण्टा कम र ज्याला कम गर्न प्रयास त लामो थाले। तिनीहरूले संसारमा कसरी थाहा सक्छ थियो लामो अघि नयाँ Corona भाइरस फैलन र प्रसार बारे केहि? !!
त्यहाँ! को Corona भाइरस डराने पछि वास्तविक एजेन्डा! यो प्रकट पाठ तपाईं आजको मा पढ्न सक्नुहुन्छ Aftonbladet :
छोटो घन्टा र कम ज्याला सीमित समयको लागि कारण Corona भाइरस फैलाउन । आम छंटनी रोक्न - छोटो मा, सरकार लक्ष्य प्रभावित उद्योगहरूमा ट्रेड यूनियन र हाकिमहरूले गर्न सहयोग उपलब्ध छ 2008. को वित्तीय संकट मा एक समान अराजकता बच्न छोटो समय काम नयाँ कानून प्रस्तुत।
मेरो बोल्ड। एक योजना को Corona भाइरस प्रसार जडानमा अहिले तीव्र गतिमा påkomna एक आमूल आतंक कार्य हो भन्ने लाग्छ थियो। तर यो छैन। सरकार वित्त म्यागडालेना Andersson (एस, सांसद) दुई मिलेर दल (सी, एल) एक मा संग प्रकार बहस लेख Aftonbladet र आफू र वास्तविक एजेन्डा प्रकट:
"यो विधान लागि आवश्यकता स्पष्ट छ र काम एक लामो समय को लागि मा जा गरिएको छ छोटो समय काम प्रणाली विस्तार गर्न। यस को प्रकोप नयाँ coronavirus स्वीडेन मा उत्पादन र जब संसारमा अवरोधहरू प्रभावित छन् स्पष्ट देखाउँछ।"
मेरो बोल्ड। जो कोहीले चीन मा वुहान केही नयाँ coronavirus को सुनेका अघि काम घण्टा कम र ज्याला कम गर्न प्रयास त लामो थाले। तिनीहरूले संसारमा कति टाढा अगाडि थियो अघि नयाँ Corona भाइरस फैलन र प्रसार बारेमा केही थाहा सक्छ? !!
यसलाई थप स्पष्ट हुन सक्छ?
म सुरुदेखि छ म पहिलो coronavirus बारेमा पढ्दा रिपोर्ट प्रतिक्रिया र जिम्मेवार हुन सक्छ अरू कुरा संदिग्ध। अब मेरो शक साँचो आउनुहोस्। यसलाई थप स्पष्ट हुन सक्छ?
र म बारेमा विचार रूपमा थप अनुगमन र यसको नागरिक निगरानी पूरा गर्न चाहेको छ।
वा अर्थव्यवस्था लङगडो व्यक्ति गर्न उद्देश्य हो? तर अर्थव्यवस्था निगरानी र नियन्त्रण समाज पनि बढ्छ भोग्नेछन्। दुवै हुन लक्ष्य कसरी गर्न सक्छ?
तर अब स्वीडिश सरकार अनजानमा प्रकट भएको coronavirus को डर अर्थव्यवस्था को उद्देश्य छ। कुनै पनि मामला मा, स्वीडेन र सुरु लागि। यो अवश्य अन्य धेरै कुराहरू पछि विस्तार गर्न सकिन्छ।
चिनियाँ प्रहरी Corona पत्ता लगाउन स्मार्ट हेलमेट छ। फोटो: dailymail.co.uk।
तर शायद यो यहाँ निगरानी र नियन्त्रण पनि छैन त टाढा समाज छ। अब, त्यहाँ चिनियाँ प्रहरीले नयाँ प्राप्त रिपोर्ट हो "सुपर हतियार" Corona पत्ता लगाउन ।
चेंगदू र Shenzen मा प्रहरी संग सुसज्जित छन् स्मार्ट हेलमेट को Corona को लक्षण मध्ये एक छ जो, पाँच मीटर मा ज्वरो, मानिसहरूलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यो टोप को coronavirus लड्न विशेष विकास गरिएको छ भने छ।
तिनीहरूले कसरी यस्तो छोटो समयमा उन्नत प्रौद्योगिकी टोप यस्तो विकास गर्न सक्षम छन्?
अधिक म मा आफैलाई राख्न Corona भाइरस प्रभाव डराने प्रचार गर्न मलाई लिन थप सतर्क म हुन्छन्। सबै छैन राम्रो मात्र उद्देश्य अवलोकन omens छ?
यो झूट बोल्नु समय
केहि अब हुन सक्छ त्यसैले हामी अन्त समयमा बाँचिरहेका छौं। यो धेरै झूट र वास्तविक एजेन्डा लक्ष्य छ कि तरिका गर्न मानिसहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रचार फैलाउन किनभने यो समय पनि धेरै मुश्किल छ।
यसलाई हामी येशूको साथ तयार सबै छ र सुरक्षित छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले अहिलेसम्म येशूले प्राप्त गर्नुभएको छ भने छैन र सुरक्षित छ त यो अब उसलाई लिन उच्च समय छ।